Igbo, John: Lesson 098 - Kraist buru amụma maka ọṅụ nke ndị na-eso ụzọ na mbilite n'ọnwụ (Jọn 16:16-24) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 098 (Christ predicts the joy of the disciples)
5. Kraist buru amụma maka ọṅụ nke ndị na-eso ụzọ na mbilite n'ọnwụ (Jọn 16:16-24)
16 Ọ fọduru nwa oge, unu agaghi-ahukwam. Ọzọ, ọ fọduru nwa oge, unu gāhukwam. 17 Ya mere ufọdu nime ndi nēso uzọ-Ya sirita onwe-ha, Gini bu nka, Ọ nāsi ayi, Ọ fọduru nwa oge, unu agaghi-ahukwam, ọzọ, ma, 'Ị ga-ahụ Nna m?' "+ 18 Ya mere, ha sịrị:" Gịnị bụ ihe a ọ na-ekwu, 'Ọ fọdụrụ nwa oge?' + Anyị amaghị ihe ọ na-ekwu. "Ya mere, Jizọs maara na ha chọrọ ịjụ ya, o wee sị ha:" Unu na-ajụ onwe unu banyere ihe a, na m sịrị, 'Ọ fọdụrụ nwa mgbe, unu agaghịkwa ahụ m, ị ga-ahụ m?'
N'anyasị a Jizọs kwuru ugboro atọ nke ọpụpụ ya. Nmeghari uche a bu ujo nye ndi naeso ya; ha aghọtaghị ihe o bu n'uche. Ma, o kwukwara na ya ga-alọta, na-ekwu banyere mbilite n'ọnwụ ya na mbido nke na-adịghị anya mgbe emechara Ememe Ngabiga ahụ. Mgbe ahụ, ọ pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ na-abanye na mgbidi; nke ahụ ga-abụ ọhụụ, mgbe ọ gasịrị nleta dị mkpirikpi ka ọ na-agakwuru Nna ya.
Mgbe Jizọs mere amụma ndị a ka ha na-arịgo n'anyasị n'Ugwu Oliv, ha aghọtaghị ya. Na mbụ, ọ gwara ha banyere atụmatụ nke ọpụpụ ya. Ugbu a, ọ na-agwa ha banyere nkewa dị iche iche ga-eme. Ha kwuputara na atụmatụ na nzube ndị a bụ ihe mgbagwoju anya nye ha.
Ha na-echegbu onwe ha na mgbagwoju anya, ebe obibi ya na-ewutekwa ya n'eluigwe.
20 N'ezie, n'ezie, asim unu, na unu gākwa ákwá, kwa-kwa-ra aka n'obi, ma uwa gāṅuri ọṅu. Ị ga-eru újú, ma iru uju gị ga-aghọ ọṅụ. 21 Nwaanyị, mgbe ọ na-amụ nwa, nwere mwute, n'ihi na oge ya eruwo. Ma mgbe ọ napụtara nwa ahụ, ọ naghị echeta ahụhụ ọzọ, maka ọṅụ nke a mụrụ mmadụ n'ụwa. N'ihi nka unu nēnwe uju, ma M'gāhu unu ọzọ, obi-unu gāṅuri kwa ọṅu, ọ dighi kwa onye ọ bula gānara unu ọṅù-unu. 23 N'ubọchi ahu unu agaghi-ajum ajuju. N'ezie asim unu, na ihe ọ bula unu gāriọ n'aka Nnam n'aham, ọ gēnye unu ya.
Jizos guru ihe ndi neso uzo ndi ozo ma ghota ihe ha nekwu, obu ezie na odigh ka ha nekwu okwu. Na nzaghachi ha na-emenye ụjọ, o kwughị egwu ha ma ọ bụ mee ka ha nwee mwute, mana o kwusiri ike na ọtụtụ ihe mgbu, anya mmiri na ịkwa ákwá ga-eme ka ndụ ha ghara ịbịa. Ọ dị ka ọnwụ eze ọma; ndị mmadụ nwere mwute ma tụfuo olileanya. Mgbe ndị na-eso ụzọ na-eru újú, ndị iro ha ga-aṅụrị ọṅụ. Site n'aka ndị iro Jisos kwuru na ụwa dum, ọ bụghị nanị ndị ọchịchị ndị Juu. Ndi nile n'èzí Nzuko nke Kraist bu nke uwa efu, nke di anya n'ebe Chineke no na ndi nupu isi megide Mo Nso.
Ọzọkwa, Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ha ga-enweta ọṅụ dị ukwuu. Oge anya mmiri na iru uju ga-adị mkpirikpi dịka ụfụ nke nne. Ndị nne na-ele ọmụmụ ndị a anya dị egwu ma e jiri ha tụnyere ọṅụ nke ijide ụmụ ha n'aka ha.
Ná mbilite n'ọnwụ, a jụrụ ajụjụ nile nke ndị na-eso ụzọ ya. Ha kpebiri ikpe ọmụma maka ha, nsogbu nke ọnwụ nwụkwara; Emabiwo ochichi Setan, iwe Chineke ewezugaghi kwa ha. Nkwenye ha, egwu na ekweghi ekwe ga egbochi nloghachi Kriast na mgbaghara ha. Ndị Juu enweghị ike ijide ha n'ihi na Onyenwe anyị ga-edebe ha. Ya mere, ajụjụ nile na nsogbu ndị na-echegbu ha chọtara azịza na ọgwụgwọ na Mbilite n'Ọnwụ n'onye ahụ bilitere.
24 Rue ub͕u a, ọ dighi ihe ọ bula unu nāriọ n'aham. Jụọ, ị ga-enwetakwa, ka ọṅụ gị wee zuo oke.
Ná mmalite nke nkwurịta okwu ọpụpụ ya, Jizọs gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ịjụ ihe ha chọrọ, a ga-enyekwa ya, ka e wee nye Nna ahụ otuto (Jọn 14:13). Ajụjụ ndị a ga-ekpuchi iwu Ụlọ Nzukọ na ọrụ ikwusa ozi ọma, n'ihi na Jizọs chọrọ ka ọtụtụ ndị na-enwe mmekọrịta nke ịhụnanya Atọ n'Ime Otu. Ya mere, o gbara anyị ume, "Chọọnụ Alaeze Chineke na ezi omume Ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a nile". Jizọs kwere nkwa na Chineke na-aza ekpere maka eluigwe na nke ụwa, ma eluigwe dị mkpa karịa ihe gbasara ụwa.
Kedu ajụjụ gị na arịrịọ nke obi gị? Ị chọrọ ego, ahụike na ihe ịga nke ọma? Ị na-arịọ maka njikọ n'etiti gị na ndị ọzọ? Obi abụọ ọ bụla banyere ịdị adị Chineke na ebere ọ na - emetụta gị? Ị na-eche na enweghị ihe efu site na Mmụọ nke enweghị ndụ gị? Ị na-eche ibu arọ ikpe na ị na-ata ahụhụ n'ihi ọnwụnwa, ọdachi na ahụhụ? Ị na-ama jijiji n'ihi mmụọ ọjọọ? Ị na-echere ọbịbịa Kraịst na mgbasa nke ịchịisi udo ya? Ajụjụ ndị dị aṅaa na-akpatara mkpụrụ obi gị, mmụọ na ahụ gị nsogbu? Ị dị elu ma ọ bụ dị omimi? Onye nwere nchekwube ma ọ bụ onye na-atụ egwu? Ndi emetụhọ ke idemfo? Ị na-arịọ Onyenwe gị maka njupụta nke Mmụọ Nsọ?
Mee ka otu nsogbu gị bụrụ ihe gbasara ekpere. Meghee obi gi nye Nna gi nke eluigwe. Ma ekwela n'ekpere, ma chee echiche nke ọma banyere ihe ị ga-ekwu. Chee echiche banyere onyinye na talent Jizọs nyewororịrị gị, ma kelee ya maka ha. Ekele kwesịrị anyị. Mgbe ahụ kwupụta mmehie gị, n'ihi na enwegh okwukwe, ịhụnanya gbasiri ike na olileanya dị nro bụ mmejọ n'ihu Chineke. Rịọ mgbaghara maka mmehie kwupụtara, rịọ ya ka o gosi gị ihe ọ chọrọ n'aka gị, ka ị ghara ịjụ maka ihe ọjọọ. Rịọ maka amara ya ma tụkwasị ya obi ka ọ nụ gị. Echefula na Chineke bụ ịhụnanya, na-achọkwa ịgọzi ndị ọzọ. Rịọchitere ndị enyi gị na ndị iro gị na Chineke nwere ike ịgọzi ha site na amara ahụ. Ọ bụghị naanị gị bụ onye nọ ná mkpa. Mmadụ nile na-ekere òkè na nke a. Gwa ajụjụ gị n'atụghị egwu na n'ụzọ zuru ezu na Kraịst, ma kpaa aja ekele na nkwupụta maka nsogbu gị na arịrịọ gị maka ndị ọzọ. Ị ga-amụtazi ihe nzuzo nke ezi ekpere n'aha Jizọs.
Ezi ekpere bu ikwurita uka na Chineke n'ekpere, ekele na ofufe. Ejila nkpọkọ dị otú a mee ihe n'ụzọ zuru ezu, na-eji okwu mkpọtụ. Gwa ihe ị na-eche n'echiche dị mfe dị ka ị ga-agwa nne ma ọ bụ nna. Onye agbata ụtụ n'ụlọ nsọ ahụ ziri ezi mgbe ọ tụgharịrị, "Onyenwe anyị, meere m ebere, onye mmehie". Nna nke eluigwe kpọlitere Lazarọs n'ọnwụ mgbe Kraịst kpere ekpere ka ọ kpọte Lazarọs n'ọnwụ. Ọ bụ okwukwe nke na-enweta nzọpụta, enyemaka na ihe ịga nke ọma. Nwee obi ike ma kpekuo Chineke ekpere site na amara, nkwuwa okwu na ekele. A na-akpọ gị nwa Ya, na-ekwu okwu ọṅụ dị ka nwatakịrị, ezobela ihe ọ bụla n'ebe Ọ nọ.
Kraist choro inye gi obi uto, obugh dika olu nke ekpere gi, kama maka ohere nke ndi n'eme gi na Chineke na Okpara ya. Kedu ihe dị gị mkpa, onyinye ma ọ bụ Onye nyere gị? Onyenwe anyi nyere gi oke, ma cheta na O zuru oke.
Jizọs chọrọ ka ọṅụ anyị jupụta. Ọṅụ na-abawanye n'ime anyị mgbe anyị ghọtara na Jizọs zara ekpere anyị, anyị ndị na-adịghị ike. Ọ gọzila ndị ọzọ wee zọpụta ha site n'ekpere anyị. Ọṅụ anyị ga-enwe ọṅụ mgbe anyị hụrụ ka Jizọs na-abịa n'ígwé ojii nke eluigwe. Mgbe ahụ ọṅụ anyị ga-abụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta. Ọ ga-abụ ọhụụ Kraịst ga-abụ ihe kachasị mkpa n'ekpere gị?
EKPERE: Nna nke Eluigwe, anyị na-ekele gị site na obi anyị n'ihi na ị zitere Ọkpara gị ka anyị bụrụ Onye nzọpụta. Na-agbaghara ụwa anyị, na-enyere anyị aka ịmara mkpa obe dị. Na-agwa anyị ka anyị na-ekpe ekpere, ka anyị wee gwa gị okwu dịka ụmụaka nye nne na nna ha n'ụzọ dị mfe. Zọputa kwa ndi-iro-ayi, ndi ike gwuru n'okpuru nmehie nile, ndi nējuputa n'obi-ha b͕agọrọ ab͕agọ n'uche-ha. Wepụ ha na agbụ ha, ka ha wee soro gị nwee ọṅụ nke ọnụnọ gị.
Olee otú Chineke bụ Nna si aza ekpere anyị n'aha Jizọs?